Cusbitaalada Imaarada Dubai Oo Lagu Qalabeeyay Ambulance-yada Dunida Ugu Xawaaraha Dheereeya | Hawraar
October 24, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Cusbitaalada Imaarada Dubai Oo Lagu Qalabeeyay Ambulance-yada Dunida Ugu Xawaaraha Dheereeya
Imaarada Dubai ee dalka Isu-taga Imaaratka Carbeed, ayaa cusbitaaladeeda lagu qalabeeyay markii ugu horaysay, gaadiidka gurmadka deg deg ah ee ugu xawaaraha dheeraya dunida, waxaanay taasi ka dhigaysaa in cusbitaalada Imaaradaasi noqon doonaan kuwa ugu horeeya dunida ee gaadiidkaas hela.
Imaarada Dubai oo iyadu qore booliskeeda loogu qalabeeyay gaadiidka dunida ugu qaalisan, sida baabuurta Lamborghini Aventador, Bounmy Ferrand iyo Aston Martin One – 77, ayay dhacdadaasi ka dhigtay, mid si wayn u naaqishto warbaahinta dunida kuwooda ugu waaweyn uguna magac dheer.
Laakiin sheekada ugu layaabka badan ee todobaadkan ku soo kordhay arrimaha layaabka Dubai, ayaa ah gaadiid lagu yaqaano, xawaaraha iyo baratanada dunida oo lagu daray, adeega caafimaadka ee Imaaradaas, waxaana sida guddida maamusha caafimaadka Dubai ku warantay, si rasmi ah loogu kordhin doonaa, gaadiidka gurmadka bukaanka ee caafimaadka Imaarada Dubai, baabuurta Lotus Evora ee baratanada iyo tartamada lagu galo.
Gaadiidkan oo ka mid ah kuwa dunida ugu xawaaraha dheereeya, may ahayn kuwo loogu talo galay in si caadi ah loo wadan karo, ama shaqooyin kale loo adeegsan karo, laakiin waxa lagu sameeyay wax ka badal, si ay suura gal ugu noqon karto in ay hawsha lagu wado inay qabtaan ula jaan qaadi karaan.
Marka laga tago, qiimahooda lacageed iyo xawaarahooda aadka u sareeya, waxa aan ilaa wali la garan Karin, sababta ku kaliftay guddida caafimaadka ee Imaarada Dubai u door bideen ama ugu doorteen, iyada oo ay jiraan, halista nabad galyo ee xawaarahooda sareeya sababi karo. Waxaanay kaliya ka hadleen guddidu in ujeedadoodu tahay horumarinta caafimaadka gaar ahaan adeega gurmadka deg dega ah.